Ijelo losasazo: I-Dragon TV ifumaneka kwi-iTalkBB Chinese TVIindawo eziphezulu eziphezuluIsikhundla -PhezuluBukela
Inkqubo yeDragon TV kunye neFengxing.com yeenkqubo ezinkulu zokuzonwabisa "Sista Over Flowers", ezazisasazwa ngaxeshanye eIstanbul nasePamukkale, zigqibezele uhambo olumnandi.Umfanekiso wenkwenkwe efudumeleyo uMa Tianyu kunye nothixokazi u-Lin Zhiling waphinda wanconywa kwakhona.Ukuhlekisa kukaLi Zhiyan kunye neemfundiso zikaDade Fan, inqwelana Ubumnandi bolu hambo buqhubeka bu kunyibilikisa iziko, ibhafu kunye nekhitshi elifanayo? Ndikunike uhambo lokuthandana kwiindawo ezingafaniyo. Emva kohambo oluhlwempuzekileyo, kwindibano enqabileyo "yobumnandi", ehamba no-Li Zhiyan, o dade baqala "ukubawa" ukubamba izidlo, ngelixa u-Ma Tianyu wasebenzisa u "Wei Dun" ukuvusa umsindo kuluntu .. Xa uFan Dade wajongana noMi Tianyu owayebuyile, wayencokola ngemfundo ephinda-phinda. UNuan Nan ubuyile eyokufumana intombazana yesitrato egxothiwe kude nesitrato.
Kwavela ukuba kwindlela eya kwindawo yokutyela, intombazana eyayicula esitratweni yavuselela iinkumbulo zobuntwana zikaMi Tianyu.Akakwazanga ukwenza isicelo kwiqela lenkqubo ukuze ahlawulele uthando kunye nenkuthazo.Ngenxa yoko, ilizwe alikho rhabaxa. Xa sibuyela kwindawo yokuqala, intombazana inyamalale ngaphandle komkhondo, ishiya indoda efudumeleyo ingathethi kwaye igxothiwe. Ngaba ibali liza kuphela ngolu hlobo? Xa isandi sesandi somculo esikhanyayo sisasazwa kumawaka eekhilomitha, saphinda sadluliselwa ezindlebeni zikaMa Yuyu.wasiva isandi kwaye ekugqibeleni waliqonda iphupha lakhe lothando lomntu olushushu.
Kodwa emva koKuphelelwa kukho "iindaba ezimbi" enye emva kwenye. Indiza yathi akukho nto ilungileyo, yitshintshe ibhasi, fan fan "imnandi kwaye ikrakra." Ukuze kungachaphazeli ukuphumla kukaDade Fan, oodade badibana e-Nange, u-Li Zhiyan wakhulula ingubo yakhe yomphathi kwaye wabonakalisa ubuchule bokubamba kunye nomakazi u-Xue. Yindoda leyo, kwaye kuninzi kakhulu ukumjonga.
Nangona kunjalo, elona candelo likulindeleyo lomcimbi ka "Dadewethu Hua Yang" yindawo yasentwasahlobo yasentwasahlobo. Kukho intetho ethi, "mhle okanye hayi, manzi aseSanta yakudala; awumhle, isinqeni se-Zhiling," o dade bona sele bangene emanzini, kwaye bobabini abagcini bababini kufuneka bahambe nabo. U-anti Xue's "ndinxiba impahla yangaphantsi kwaye ndikuphelezela emanzini" wanyanzela uMa Yuyu ukuba alalanise, kwaye ibinzana lesithixokazi "Ndinxibe (suti yokuqubha)" lahlula ngqo intambo yokhuseleko lwengqondo kaMa Yuyu kwaye yabanzima. I-Sexy, emanzi, yonke indawo yakho yokucinga ibonakaliswe kwinyani, udade Zhiling ushushu kwaye uhlamba kunye nothixo oyindoda, kuphela ngumona, umona kunye nenzondo inokumela umhlaba wangaphakathi weLingfen.
Ijelo losasazo: CCTV-1, iyafumaneka kwi-iTalkBB Chinese TVIindawo eziphezulu eziphezuluIsikhundla -PhezuluBukela
Inkwenkwezi: Li Youbin, Li Ge, He Minghan Uhlobo: Uphando loLwaphulo-mthetho
U-Liu Yusheng, osebenze njengepolisa lolwaphulo-mthetho ubomi bakhe bonke, waqeshwa njengo-Nobhala-Jikelele weSiseko .. Wayengonwabanga emsebenzini wakhe xa wayefika okokuqala kwisiseko. Xa yeva kwaye yangqina ukuba amanye amaqhawe enza isenzo sobulungisa aphathwe kakubi ngenxa yobugwenxa babahlanguli kunye nokungafezeki kwamaziko okhuselo lwentlalo, wagqiba kwelokuba aqashe igqwetha leSiseko ngesibindi sokulunga .. Igqwetha elidumileyo u-Wang Yujia wazityumba, wangena nentatheli uSu Lili. Vumela uLiu Yusheng abe nokuqonda okutsha komsebenzi wesiseko. Kodwa kubomi bokwenyani, indleko yokwenza ngenkalipho iphezulu kakhulu.Xa sele onakaliswe abanye, le ndleko inokutshintsha ubomi bomntu. Umfundi ophakathi kwisikolo esiphakathi wahlangula ixhego elidala esitratweni.Wamfamekiswa yintsapho yalomntu umdala.Liu Yusheng wakhokela kwingxoxo yesiganeko kuluntu.Uyixhasa olu hlobo lokuziphatha ngesibindi eluntwini kunye nomthetho, esenza abantu baziva ukuba Ukuvuma kwakhe ukunceda abantu wathuthuzeleka. Ngomzamo wabo oqhubekayo, umoya eluntwini uye wahlanjululwa, kwaye indima yesibindi sele isisikhulu kwaye inkulu.U-Liu Yusheng naye unolwazi olutsha loxanduva. Ifilimu isondele kubomi, ikhuthaza ukulunga, kwaye igcwele amandla amahle.
"Utata opholileyo kunye noMama ofanelekileyo"
Inkwenkwezi:Li Guangjie, Tong Liya, Zhao Ziqi, Gao Yalin, Gao Lu, Zhu Rui, Zhou Dehua, Chen Wenqi
Uhlobo: Urban Emotion
ILanga Dalei yaqhawula umtshato nomkayo uSu Yun kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwaye isibini sabantwana sahlala noSu Yun. Ngesiquphe uSu Yun wayeya kusebenza eHong Kong unyaka kwaye wagqiba kwelokuba ashiye umntwana wakhe aye eSun Dalei ayomkhathalela. USun Dalei akakwazanga ukuziqhelekela ukubalekela okwethutyana, kwaye inkwenkwe kaSu Yun uHuang Xinhua yathatha inyathelo lokugcina abantwana. Izenzo zikaHuang Xinhua zivuse umdla weLanga Dalei wokuphumelela, kwaye bobabini baqhubeka "nemfazwe yokufumana umntwana". USun Dalei wayexakeke ngumsebenzi wakhe kangangokuba wasiphinda-phinda isithembiso sakhe phambi kwabantwana bakhe, kwaye abantwana bakhe ngokuthe ngcembe basondela kuHuang Xinhua. Uloyiko lukaSun Dalei ngomtshato washiya isifuba sakhe u-fan Li waphoxeka kakhulu, kwaye iLanga Dalei yawela kwimeko "yokuhlaselwa lutshaba". Emva kokufunda kumava abuhlungu, uSun Dalei wasebenzisa amanyathelo afanelekileyo ukubuyisela ukuthembana kwabantwana kunye nomntu wonke, kodwa inkampani yaya kubhengezwa. Intombi ka-Huang Xinhua, uHuang Xiaoying, wafumanisa ukuba wayeyindoda eyayilangazelela ukuthatha uxanduva ngexesha ledabi lokuxabana neSun Dalei. Ngaphantsi kwempembelelo kaHuang Xiaoying kunye nabantwana bakhe, uSan Dalei ngokuthe ngcembe wakhula waba nguyise onembono noxanduva kunye nendoda elungileyo.Akuphela nje kokufumana ukwamkelwa kukaHuang Xinhua kunye nabantwana bakhe, wafumana nothando lukaHuang Xiaoying, kwaye ekugqibeleni wonke umntu wakufumana okwakhe. Uyolo lonwabo.
"Ikhulu elinye lamawaka eMidlalo yeHlaza yeCold"
Inkanyezi:Ajie / Huang Zhenji / UBaomu Zhongyang / Shanxin / Suzaku Orange /
Uhlobo: Uhlobo oluhlekisayo / oopopayi / Ubumnandi
Kwisiqendu sesithandathu sexesha lesibini leqela "I-One Hundred Cold Joke", le protagonist eyindoda engachazwanga (evezwe nguAjie) emva kokoyisa iKings yeZinyoni kunye noShit, yabangela ukuba umhlaba ubandezeleke ngokungalindelekanga ngenxa yokuqhushumala kwamandla akhe kweTucao. Intlekele, inguqulelo ye-movie yebali liqala. Kwisitishi sokudluliselwa komphefumlo, umntu obhinqileyo wasinda ngengozi waya "emngciphekweni wexesha" ongaqondakaliyo, waphinda wabhala imbali yokutshutshiswa komhlaba ngoncedo lwabalinganiswa abangaqondakaliyo, wabuyela kwangaphambilini ukuze abe ligorha elisindise umhlaba; kodwa ngokungalindelekanga Izinto zenzekile, ixesha kunye nendawo zaziphithiphithi, abantu abaneempawu ezimbini ezinemilinganiselo eyahlukeneyo besiya kwilizwe legorha, kwaye iqhawe lada lahlangana no-Li Jing (evezwe nguBaomu Zhongyang) kunye no-Nezha (ovakaliswe nguShanxin) kwifonti. Isithwathwa esimhlophe (esivezwe yiVermilion Orange) kunye nePinocchio (ivezwe nguHuang Zhenji), ukuze kubuyiswe ixesha nenxuwa, wonke umntu waqala uhambo lokusindisa umhlaba kwakhona ...
UMlawuli: Lou Ye
Inkanyezi: Qin Ewe / UGu Xiaodong / U-Huang Xuan / UZhang Lei / UMay Ting
Okokuqala64Ibhaso leSilivere Bear kuMnyhadala weFilimu wase-Berlin Ibhaso lokuGqibela ukuPhumelela lobuGcisa
Okokuqala51Umnyhadala wefilimu weholide yeTaipei Umvuzo weHashe eliGolide Ifilimu ebalaseleyo
Ingozi ebutsheni bakhe yabangela ukuba inkwenkwe uPony (Huang Xuan) ingaboni ngamehlo.Emva kokuzama ukuzibulala, uGony oshukumayo wafudukela kwiziko leMessage ukuze kuqhutyekwe nemfama nguSha Fuming (uQin Hao). Apha, baninzi abaziimfama njengoXiao Ma, nokuba bayazalwa okanye bafunyanwa, ukuhlala ebumnyameni obuqhelekileyo kudale ubudlelwane obunzulu kunye obuqinileyo phakathi kwaba bantu abaziimfama.
Ugqirha Wang (odlalwa nguGoo Xiaodong) kunye nentombi yakhe uXiao Kong (edlalwa nguZhang Lei) evela kude esiya ku-Sha Fuming .. Ilizwi lobufazi kunye nokuphefumla emngxunyeni kwenza ukuba u-Xiao Ma abe neentliziyo, kwaye u-Xiao Ma owayeqhubeka esenza isigqibo. Ilizwi laqhubeka lisondela kumngxunya omncinci. Emva koko, kwavela inenekazi lesonwele eligama linguXiaoman (Huang Lu) ebomini bukaXiao Ma.Ndaxa ixesha lihamba, uXiao Ma waqala ukuba nemvakalelo ngo-Xiao Man.
I-Phillip Island ipenguin yokuza kwamnandi kuyatyhileka!
I-Moshi CBD izokwaphuka! Ukuvalwa kwendlela kuya kuqhubeka iminyaka eliqela